Ogaden News Agency (ONA) – Ayaamahaan diblomaasiga ahaa aqontii iiga korodhay Ethiopia
Ayaamahaan diblomaasiga ahaa aqontii iiga korodhay Ethiopia
Posted by ONA Admin	/ April 9, 2012
14 maalmood oon wadahadal been iyo khayamo ah lagalay Ethiopia
Markaad joogto Geeska Africa wax iska-caadi ah maaha inaad lahadasho qof ajnabi ah, mana badna inaad xidhiidh la yeelato siyaasi ajnabi ah sidaa darteed, waxay iu noqotay layaab markii aan ka jawaabay telfoonkayga; ‘hilow magacaygu waa General Tafasse Fanta –” nin hadalkiisa oo kaliya aan ku gartay halkuu kayimid, -luuqadiisa –english-ka ahayd ayaa fasiraysay inuu yahay Ethiopian. Yaabka iigu badanana wuxuu ahaa title kiisa-General!
Kenya way ka badalantahay Ethiopia. Dadka Kenyaanka ihi waxay haystaan xoriyad, waxaa sidookale xoriyad yar haysta dadka qaxootiga Ethiopa ka soo qaxay iyo shirqool- fuliyayaasha nabadsugida Ethiopia labadaba, taasina waxay keentay in dad badani kusoo qaxaan Kenya, Ethiopia lafteedana ku dhiirigalisay inay yimaadaan hawlahoodana ka qabsadaan halkaa.
Markan waxay ahayd waxtigii durbaankii Nabada-Beenta ah ee ururkii magacyo-badan iyo kuwii Hadfay. Waxaa kale oo isaguna qayb wayn kulahaa howlaha Ethiopian-ku ka wadeen Kenya qolyo kale oo magac culimo watay. Intoodaas oo iskaashanayana waxay fulinayeen olole siyasadeed iyagoo isticmaalayay habkasta oo horay loo yaqaanay iyo kuwo kale oon la aqooninba sida ; sabaalid, duufsi, cabsigalin, dil, afduub, sixir, diin iyo qabyaalad. Aniguna waxaan nasiib kaga mid noqday dadkii duufsiga lagu dayay waxaana uga faa iidaystay sidii xaqa ahayd.
14May 2010 ayay ahayd markii xidhiidhkii ugu horeeyay aan ka helay taliyihii kiflatoorka Bale, waxuuna ahaa run ahantii nin si fiican umatalaya xukuumadiisa, waxaana ka muuqatay tilmaankasta oo ay lahayd Ethiopia, sidaasi darteedna waxaan sabab wanaagsan u haystay inaan u sheego fool xomaanta ay leedahay cidda uu matalayaa.
Qaybtiihore ee hadalkiisa waxay ahayd qaybta ugu danbaysay ee tilmaanta dawladiisa; “waxaan ahay general Tafase Fanta, waxaan doonayaa inaan kaala hadlo arimaha nabada ka hanaqaaday jamhuuriyada fadaralka ah ee Ethiopia. Waxaana kaa codsanayaa inaad wakhti isiiso si aan kuula hadlo. Hadaad Janis isiiso waxaan kaaga sheekayn lahaa arimo kaa farxinaya. Waxaana kaa codsan lahaa inaad nabada taageerto” ayuu yidhi.
Kadis iyo filan waa bay igu ahayd arintani. Mayna jirin mansab siyasadeed oon hayay oo ifahansiisa sababta uu general iila soo hadlay. Waxaa kale oo yaab igu ahayd xidhiidhkayga siduu ku helay. Wuxuu u muuqday nin aad ugu oomin cid ka dhagaysata beentiisa wuxuuna muctaad u ahaa helitaanka cid uu duufsado aniguna waxaan aad muctaad ugu ahaa inaan ogaado ujeedada uu iila soo hadlay iyo cidda uu kahelay xidhiidhkayga. Daqiiqado kadib ayaan ku celiyay waxaana u sheegay inuu 10 daqiiqo kadib isoowaco taas oo uu iga yeelay.
Waxaan latashaday xubno kale waxaanuna isl garanay inaan lawadno hadalkiisana duubno ujeeda-danaduna ahaato inaan hubsano ciduu yahay. Hadii uu ninkuu sheegtay yahayna sidhab ah u fahano habkay isticmaalaan, dadkay dirsadeen, cidda ku xidhan iyo meelaha ay ka soo duulayaan intaba. Malaheenu wuxuu u badnaa inuu yahay qofkuu sheegtay. Ethiopian nimadiisa waxaa xaqiijiyay lahjadiisa, meeeshuu joogana waxay noola ekayd inaanu hubno oo ah –Ethiopia – sababtuna waxay ahayd telfoonka uu isticmaalayay wuxuu ahaa midguri oo Ethiopia laga leeyahay.
Mudadii ooyna ilbiriqsiyo dhaafin ayuu soo laabtay Tafasse “hilow my brazar”. Inkasta oona ka shakiyin inuu yahay ninkii aanu wada hadalay, hadana markan danbe wuxuu isticmaalayay telfoon-gamceed Kenya laga leeyahay, wuxuuna marlabaad kusoo celiyay intii uu markiihore igu yidhi. Waxaan ufahmay inuu ujeedo wayn kalahaa line ka telfoonka ee hore iyo kan danbaba waxaana ugu dhawayd ujeedo cabsigalin ah inuu uga danlahaa si uu iigu muujiyo inuuna iga durugsanayn hadii aakhirka is afgaranwaa howshu ku dhamaato. Laakiin saamayn kale ayay igu yeelatay arintaas telfoon badalka ihi ; waxaan haystay sabab wanaagsan iyo fursad labadaba inaan isagana tuso inaana cidna kabaqayn waxaana iskudayay inuuna ifahmin inaana xor ahayn.
Maan Baray iyo Maan Bilaad
Hadal dal-dalan ah oon hubay inuu in badan kucel-celiyay hortay (malaha dadbadanoo iga horeeyay ayuu u akhriyay ),ayuu dal-dalay; “.. Nabada ka dhacday killil5 waad la socotaa, waxaanu heshiis lagalay jabhadii ugu waynayd uguna cimriga dheereyd ee UWSLF, waxaa kale oonu heshiis lagalay ONLF. Waxaanu idiinku baaqaynaaa adiga iyo saaxiibadaaba inaad timaadaan dalka. Safaaradu waxay bixiyeen 700 oo visa, waxaa kale oo safaardaha dalku bixiyeen 400 oo baasaboor. Hadii adigu aad aqbasho waxaanu ku siinaynaa basbor aadku aado dhulkaagii” ayuu generalku yidhi.
Erayga jabhadii ugu danwaynayd e (U)WSLF ayaa isku kay taagtay waxaana maskaxdaydu dib ugu laabatay jabahda uu sheegayo da’deeda, anigoo og beenimada sheekadan oo dhan hadana sababtu waxay ahayd in qaadashada magaca (U)WSLF markiiisii horeetaba ay iyagu (Tigray) u dooreen ururka is-dhibidoona, si loo adeegsado erayga ah JABHADII UGUDA’WAYNAYD oo heshiish qaadatay. Hadalki ayaan ka dhex galay oon waydiiyay; “saw umajeedid Al-itixaad ,kuwaas ayaa xaroodaye?” hasa ahaatee wuxuu doortay inuuna ka jawaabin, wuuna iskasiiwatay hadalkiisii isu wada ekaa. Intaas oo kaliya ayaan ka fahmay wuxuu yahay oodhan waxase ii hadhsanayd waxyaabihii uu ka sameyay Kenya inaan ogaado .
Waxaan ku idhi; “ Hadii aad nabad ku baaqyso ONLF mayna idinla heshiinine maad iyaga raadsataan”. Wuxuuna ku jawaabay;
“ONLF way diiday nabad, waxaanu u dirnay odoyaalshii ugu magaca dheeraa deekaanka wayna ku soo gacan saydheen, eegana waxaanu doonaynaa adiga iyo dadka wan-wanagsan eekaleetaba inaad lahadashaan oo aad nabada ugu baaqdaan”
Waxa uu ii sheegayay oo dhan waxay sax ku ahaayeen kaliye sida uu sheegayo cagsigeeda. Malaha wuxuu ahaa General ciidan oon waxba ogeyn, waxuuse uga dhawaa in kibir iyo islawaynida ay u sahashay beenta .
Nasiib daro General Fanta muuna ogayn inaan ahay wiil uu dhalay Odaygii hogaaminayay duqayda uu sheegey in nabad loo diray aakhirkiina iyagu dileen. Waxaan sidii aan horayba u yeelayay ku-garbiyay su’aal kale; “miyaad lasocotaa odoyaashii aad ergada u dirteen meeshay kudanbeeyeen? ciidamada nabadsugidu inay laayeen, xidheen amaba cabsigalin darteed dalka ka qexeen? miyaad xasuusantahay? Ayaanwaydiiyay.
Sidii uu yeeli jiray ayuu iskasii dal-dalmay aniguna waanku dayday waanuna isla jaa-faa-jiriqnay ilaa heer uu kalumay luuqadii wada-xajoodku ku socday ee ahayd Ingriisiga isuna badashay axmari. Inkasta oon ku hadli karay axmariga hadana maana rabin inaan kula hadlo si aan u yareeyo faseexadiisa jaaniska been-qurxintuna ay isaga ugu yaraato, laakiinse markan waan kula hadlay wuxuuna isku ciil kaambiyay inuu jaanis ka lumay oo ay ahayd inuu axmari hadalku ku socdo maadaama ay ku adakayd luuqada English-ku.
Muran kale ayaa hadana ka dhashay kala badalka luuqada waxaan ku adkaystay in aanan af Axmari ku hadlaynin kana dhagaysanaynin. Sheekada oo ahayd maan baray iyo maan bilaad waxay naga gashay meel adag xanaaq iyo ka cadhaysiin aana uga ba’aynin darteedna waxuu hadalkiisii u gudbay isfaanin iyo hanjabaad dhankiisa ahayd iyo cay iyo u qabsoomid la’aan dhankayga ah. Waxaa ka mid ahayd hadaladiisa; “waxaanu nahay dawlada ugu wanaagsan ee abid idin soo martay”. Waxaana ugu jawaabay; “aadbaad u wanaagsantihiin sababtoo ah qoyskii 4xabsi ku kala jiray ayaad hal isugayseen. Hormarbaad samayseen sababtoo ah dadkii kuwii hore bareen siday geela ulayn lahayeen ayaad barteen sidii ka laj oogana loo dili lahaa. Isdhexgalka aad samayseen wuxuu noqday in aabihii ay kuwii hore luga tireen idinkuna dhutinta aad ku caydaan. Barbaarkay waxbarashada u diideena jaahilnimaad ku ceebeysaan waxaad noo sheegtaan in hooyada aad dilaysaan oo ilmahay siddao aad dhakhtar u dhisteen”
Isagoo ii mana sheeganaya ayuu yidhi; “Luuqadiina ayaad wax ku barataan”. Jawaabta aan siiyay waxay noqotay; “hadii sideetamadkii aanu u baahnayn qorista farta-hooyo maanta waxanu ubaahanay dhakhaatiir. Hadii aanu u baahnayn ceel geelu ka cabo maanta waxaanu u baahanay mid dadku ka cabo. Hadii kuwii hore ciidankooda la dhihi jiray waa kuwiii-buuraha idinkuna waxaad u bixiseen ciidankiina kuwii Saxaraha”.
Kadib waxaan simutuxan ugu sheegay inuu yahay tilmaanta ugu wanaagsan ee xukuumada una taaganyahay sawirka dhabta ah ee TPLF isla markaana yahay hogaamiye ciidan saasi darteedna loo baahanyahay in hadii wadahadal la gali in siyaasi loo igmaday xilkeeda uu qaado aniguna wali aan diyaar u ahay inaan sii wada hadalno.
Tilmaamahaas oo dhan wuu qaatay, laakiin wuxuu ka gows qabsaday in cidkale loo badalo wada-xaajoodkanaga, wuxuuna yidhi; “waxaan ahay General Tigray ah, waxaana sxb iyo qaraabo nahay Raysul wazare Meles, waxaanan xubin sare ka ahay TPLF. Aniga ayaana la’iixilsaaray” .. ayuu sideed-jeer ku cilceliyay.
Tanaasulaad aan sameyay kadib ayuu isna ogolaaday in cidkale oo siyaasi ahi ku soobiirto wadaxaajoodka, anigana waxaan ogolaaday inaan axmari ku wada hadalno.
Qaybtii 2aad waxaan ku soo qaadan doonaa markuu nugu soo biiray Asfow oo ah siyaasi katirsan xafiiska Raysul wazaraha.
Halkan ka sii akhri Qaybtii 2-Aad.
kkkkkkkkkkkkkkk mar kahore waxaan salamayaa hawal wadeenada ogadennet news marka 2 waxaan salamayaa bahada shekadan cajiibka ah qoraty waaana wax maskaxadeeda galay markaan firiyey aqaliga itoobiyaanka waxan sugeynaaa qeebta dabe fadalan noosoo dadajiya
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk walleee waa Dabeecadii Itoobiya Markaan Sheekadan Akhriyay waxaan soo Xasuustay Mid aniga iyo Midkan oo kale 26-August-2010 nadhexmartay.
Inkaari idinku dhacdayeeeey Ethiopia Qaabdaranaaaaaaaaa.
Marka hore waxaan salaamayaa hawdeenada wapka waxaan kaloon salaamayaa n/huraha ay arintani ku dhacday run ahaantii sheekadu waxay si dhab ah u taabanhaysaa dhaqanka Tplf dhaqanka beenta iyo madax adayga ku dhisana waa midka ay ku caan baxday taliska KT zanawi maanta ree ogadenia bilaansho uma hadhin waayo mudo dheer ayaan la soo daalaadhacaynay khiyaanada tplf sidaan u minja xaabin lahayn maanta dhamaadkii ayaaban maraynaa in badan ayuu tigray na khiyaamay maanta waa maalintii aan inagu khiyaani lahayn isaga
dhamaan waxaan salamaya in jecel nolasha u,ada dulman ee reer ogadeniya salan kadib halagame noor waaa loo baahan yahay tan kugu dhacaday lafteeda in aaad nooga sheekeeyso sanadkii 2010 wuxu ahaaa sanada riwaayado badan soodhaceen in laga sheekeeyana way mudan tahay kk ato fanta waad aragata sida dhagaha loogu dhuftaye
Wakaa waxa dadkeenna haysta maalin walba
Asc Dhamaantiin Asaxaabta Bacda Salaan Muddane Zakariye Inshaa Allaah waan soo bandhigi doonaa Sheekadaas Nadhexmartay Aniga iyo Ninkaas Tigreega ah hadii Alle Idmo balse ha laga wada Digtoonaado Khiyaanada Gumaysiga Cawaanka ah.